CO-WIN (HK) kambani shoma, nyanzvi epurasitiki denga remba mugadziri, rakavambwa kupa yokuisvonaka epurasitiki kuzvinhu zvokuvakisa panguva yemakwikwi chaizvo mitengo kumusika pose ane chikwata nyanzvi nenyanzvi vanovakurudzira zvikuru chaizvo basa kubatsira basa renyu kukura. zvigadzirwa edu kufukidza PC chemarata jira, PC jira rakasimba, PC mhango jira, weatherproof Asa PVC rinoumba denga jira, Asa chakaita zvokugadzirwa nebwe Tile, 3 rukoko kupisa insulated uPVC denga jira, FRP papepa etc.
With nyanzvi chikwata chedu uye 13+ maindasitiri zvakaitika, izvi unotipa kupa edu vatengi chigadzirwa customized basa uye OEM basa. Isu kwete chete kupa shoma unhu zvigadzirwa, uyewo kupa nzwisisika wedzerai cheni zvakanaka izvo anovimbisa vakarongeka ainge atumirwa pakusununguka. zvigadzirwa edu akavimbisa nemakore 10-30 garandi yakavakirwa zvinhu zvakasiyana uye mumwe zvacho zviri 100% iongororwe asati zvacho.
CO-WIN icharamba kuedza kunatsiridza pachedu kuti maximize mutengi kugutsikana uye kubatsira vatengi kuti mutengo-runziro uye nomazvo bhizimisi pamusika pose. Tinotarisira wobvunzisisa wako uye kushanda pamwe kuti vazadzise takunda zvisamumirira pamwe.